Mpandraharaha 5 tsara indrindra amin'ny tantaran'ny Pro Wrestling - Wwe
Mpandraharaha 5 tsara indrindra amin'ny tantaran'ny Pro Wrestling
Hafa izao tontolo tolona iainantsika izao.
Raha hiverenana ny andro, mpanao tolona matihanina dia mandehandeha mitety tanàna toy ny siramamy, miaraka amin'ireo mpihetsiketsika izay niasa toy ny mpifindrafindra monina ary nanao fihetsika goavambe ho an'ny andianà mpankafy nijery tamim-pahagagana. Ny lalao dia namandrika toerana nahitana ny matanjaka ary amin'ny tranga tsy fahita firy, ny underdog dia hisintona fandresena amin'ny valanoranon'ny faharesena.
Androany, na dia ny fanafoanana an'i Kayfabe aza dia misy lalao napetraka mba hilalaovana ny herin'ny vahoaka. Betsaka ny lalao mandresy Davids sy Goliaths izay tsara fanahy sy malefaka kokoa. Ny olona manan-danja indrindra amin'ity dihy ity dia ilay mpamandrika boky izay manapa-kevitra ny amin'ny anjaran'ny tsirairay.
Ny Fitsaram-paritr'i Etazonia ho an'ny Distrikan'i Iowa atsimo dia namaritra ny mpamandrika iray tamin'ny 1956 hoe '... na iza na iza, amin'ny sarany na amin'ny komisiona, dia miara-miasa amin'ny mpanentana na mpanentana amin'ny fampisehoana mpikatroka amin'ny fampirantiana tolona matihanina.'
Ny famandrihana ihany koa no teny ampiasain'ny mpiady mba hamaritana ny lalao na ny fisehoany amin'ny fandaharana amin'ny tolona.
Nandritra ny taona maro, noho ny faritra samihafa, ny fampiroboroboana ary ny fahatsapan'ny mpankafy, ny famandrihana dia lasa zavakanto very.
Raha jerena fa saika ny zoro rehetra dia notadiavina sy naverina tamin'ny fotoana, nanjary raharaha be ny fahitana fomba vaovao sy manavao ny toetran'ny olona. Na eo aza izany, misy ny mpamandrika sasany izay nahita ny marina ary nitolona tamin'ilay toetrany ankehitriny.
Ity misy topy amin'ireo mpamandrika dimy lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra:
# 1 Vince McMahon
Hatramin'izao, Vince McMahon no mpamandrika boky lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra
Na inona na inona nitranga tamin'ny WWE tao anatin'izay dimy taona lasa izay, tsy mbola nisy mpamandrika tsara kokoa tamin'ity orinasa ity - vanim-potoana. Na dia talohan'ny nividianan'i McMahon WWE tamin'ny rainy aza dia efa niasa ambadiky ny seho izy mba hamokarana vokatra tsara kokoa.
Rehefa nandray ny toerany izy ary namorona fialamboly ara-panatanjahantena, izay nitarika ny famoronana Hulkamania ary WrestleMania taty aoriana, naneho talenta tamin'ny fomba tsy noeritreretin'ny hafa velively i McMahon. Nanao ny anaran'ny ankohonana The Rock, Steve Austin ary John Cena izy.
McMahon koa dia namokatra hetsika mavitrika isaky ny mijery karama ary namorona iray amin'ireo mpilalao malaza indrindra amin'ny tantaran'ny tolona - The Undertaker - ary mazava ho azy, ny toetrany manokana Andriamatoa McMahon. Azo inoana fa tsy hisy tompona / mpanentana hafa manana fahitana lavitra toy izany momba ny orinasan-tsika ho an'ny tolona miandalana.
Amin'ny ankabeazany. McMahon dia nanandrana nanaraka ny fotoana.
ahoana no hanatsarako ny fiainako
omeo toerana hitiavany anao
wwe helo amin'ny tapakila sela 2016
inona no hatao rehefa ao anaty fiarahana fa toy ny olon-kafa
blac chyna ary rob manambady
john cena trano tampa adiresy
manjaka roman vs samoa joe